Semalt: Vimba ukuFikelela kwiSayithi lakho ngokuQinisekisa ngeMeta Tags kunye neeFayile zeRobots.txt
Jason Adler, Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi unokukwazi ukulawula oko kwabelwana ngeBing, Yahoo, kunye neGoogle xa ugcina idatha ekhuselekileyo kwaye ungayibani kwi-intanethi. Idatha oyifunayo ukugcina imfihlo ibandakanya ulwazi loqhagamshelwano, i-ID ye-PayPal, iinkcukacha zekhadi lesikweletu, amagama abasebenzisi kunye namaphasiwedi. Kufuneka uvimbele olu hlobo lwengcaciso ukuba lube nekhompyutheni kwi-Google nakwezinye iinjongo zokusesha. Xa kuziwa ekuthintela ii-URL zesayithi lakho, kunokwenzeka ukuba unqume iGoogle kunye nezinye iinjongo zokukhangela ekukhawuleni amaphepha athile okanye amanqaku. Kuthetha xa abantu behamba ngemiphumo yokukhangela, abayi kubona kwaye bahambi kwii-URL ezivaliwe. Kwakhona, abayi kukwazi ukufikelela kumxholo walo, kwaye unako ukumisa amanqaku amaninzi ekuboneni kwiziphumo zophando zeGoogle. Nantsi indlela yokuvimba ukufikelela kwisiqulatho sakho kwiwebhusayithi:
Vimba ukutshekisha okutshintshiweyo ngeemeta tags: Unokubambelela kalula amakhasi ukuba avele kwiinjinjini zokukhangela xa usebenzisa ii-meta tags kwi-site yakho yekhowudi ye-HTML. I-Googlebot ikhawula amaphepha angenawo meta tag kwaye iya kulahla amaphepha akho athile kwimiphumo yokucinga ngenxa yalo. Makhe sixelele ukuba le meta tag iya kusebenza kuphela xa iifayile zakho zeerobhothi.txt engatshintshi.
Vimba ii-URL ngeefayile ze-robots.txt: Ifayile yeRobots.txt ikhona kwingcambu yewebhusayithi yakho kwaye ibonisa isahlulo sewebhusayithi yakho ukuba awufuni ukuba i-injini yokukhangela injini kunye nezicukuthisi zenze inkcazo. Isebenzisa i-Robots Exclusion Standard, eyimigaqo-nkqubo kunye nesethi yemiyalelo ebonisa apho kwaye i-web crawlers iza kufumana njani indawo yakho. IRobhothi..I-txt inceda ukunqanda imifanekiso ukusuka ekuboniseni kwiziphumo zophando kodwa ayivumeli abasebenzisi ukuba baqhagamshelanise indawo yakho kumakhasi abo. Kufuneka ukhumbule ukukhawulelwa kunye nokuthintela kweefayile ze-robots.txt ngaphambi kokuyihlela. Ezinye iindlela ziqinisekisa ukuba ii-URL zivaliwe kakuhle. Imiyalelo yee robots.txt izikhokelo, oko kuthetha ukuba abanako ukunyanzelisa ukuziphatha kwabakhweli bewebhu. Bonke abaqhawulayo basichaza i-syntax ngeendlela zabo, kwaye iifayile zeerobhothi.txt ziyakwazi ukukhusela izikhokelo kwikhonkco lakho kwiiwebhusayithi. I-Google ilungele ukulandela izikhokelo zeefayile ze-robots.txt, kodwa kungenakwenzeka ukuba injini yokukhangela ibonakalise iwebhusayithi evinjiweyo ngenxa yeenkqubo zayo.
Phuma kwi-Google Local kunye ne-Google Properties: Unokubamba umxholo wakho ukuba ungabonakaliswa kwiimpawu ezahlukileyo zeGoogle emva kokuba zikholiswe. Oku kuquka i-Google Local, i-Google Flights, i-Google Shopping, ne-Google Hotels. Xa ukhetha ukuphuma ngaphandle kokuboniswa kuzo zonke ezi ntengiso, umxholo wakho owenqambileyo awuyi kubalwa okanye kuhlaziywe. Naliphi na into eboniswa kuyo nayiphi na yalezi ziqonga ziya kususwa kwiintsuku ezingama-30 emva kokuphuma.
Kubalulekile ukufihla umxholo osisisiseko kunye noluncedo kwiindwendwe zakho. Ukuba iwebhusayithi yakho inezihloko ezifanayo kwiindawo ezininzi, ezingashiya impembelelo engafanelekanga kwiinjinini zophando kunye neendwendwe zakho. Yingakho kufuneka ufihle onke loo maphepha kwaye ungavumeli iinjinjini zokukhangela zibonise. Lahla umxholo kumntu wesithathu. Kufuneka ulahle umxholo wesithathu ongabalulekanga kwisayithi yakho nayiphi na indleko. Ungavumeli i-Google ibone ukuba ukwabelana ngomxholo wesithathu umntu njengoko injini yokukhangela izakubona inani elincinci kwiwebhusayithi yakho kwimeko. Xa ukopishe umxholo ovela kwiindawo ezininzi, i-Google inokukugweba, kwaye unokubamba amanqaku aphindayo ukuze uphucule ii-Google Source .